ဇော်ဂျီယူနီမှသည် ညဈေးဆီသို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
How To.. » ဇော်ဂျီယူနီမှသည် ညဈေးဆီသို့	15
Posted by လုံမလေးမွန်မွန် on Nov 25, 2016 in How To.., Think Different | 15 comments
ရွာကွပ်ပျစ်မှာ.. ယူနီကုတ် နဲ့ ညဈေးတန်းနဲ့ကို ဆက်စပ်ကြရင်း ညဈေးတန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ချင်တာကြောင့် ရွာထဲကို ဆွဲခေါ်လာပါတယ်..
တိမ်မည်း ။ စဉ်းစားကြည့်တာပါ….အစိုးရက ယူနီကုတ် ပြောင်းခိုင်းတယ် လို့ ဆိုပါစို့ ….
ပြည်သူတချို့ ။ ။ ဘာလို့ ပြောင်းခိုင်းရမှာလဲ… အရင်ရှင်းပြသင့်တယ်… ဒီလိုမျိုးအတင်းပြောင်းခိုင်းလို့ ရမလား… ဘယ်လောက် အခက်အခဲရှိတယ် ထင်လဲ….
အစိုးရက လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ပြောင်းခိုင်းတယ်….
ပြည်သူတချို့ ။ ။ အစိုးရကို နားလည်သင့်တယ်… တချိန်ကျရင် အဆင်ပြေမှာ… အစကတော့ နာမှာပေါ့… နဲနဲသည်းခံရင် အဆင်ပြေမှာပါ…. အတင်းပြောင်းခိုင်းတာ ကောင်းစားဖို့ ဆိုတာ နားလည်သင့်တယ်….
ဆူး ။ အခုတော့ ကမ်းနားလမ်း ကားရပ်ပြီး ဈေးဝယ်နေတာ လမ်းပိတ်နေတယ်
တိမ်မည်း ။ သွားကြည့်ပါဦးမယ်… မနက်ဖြန်လောက်ဖြစ်ဖြစ်…
လုံမလေးမွန်မွန် ။ ယူနီကုတ်က ကားတိုက်ပြီး မသေဘူး အူးလေးရဲ့… လှည်းတန်းလည်း မရောက်ဘူးတာ မဟုတ်… တရုတ်တန်းလည်း မရောက်ဖူးတာ မဟုတ်.. အသက်လည်း အပိုပါတာ မဟုတ်.. Option B လည်း ရွေးလို့ရတာမဟုတ်.. အဟွတ်
တိမ်မည်း ။ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဒုက္ခရောက်နေတာကို မြင်အောင်ဘယ်လိုပြောရပါ့… ဒါပေမယ့် ပြောချင်တာကတော့ လမ်းဘေးဈေးသည် ကားရှုပ်နေတာနဲ့ … မြန်မာစာစကားမှာ ဇော်ဂျီ ရှုပ်နေတာက သဘောတရားချင်းအတူတူပဲ… ဖယ်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်… အဲ့အပေါ်မှာ ဖြစ်လာတဲ့ reaction တွေ့ မတူဖူး… စာနာနားလည်ပုံချင်းမတူကြဖူး…
M လုလင် ။ ဝင်ရှည်ဦးမယ် …. ဇော်ဂျီ နဲ့ ညဈေးတန်း … သက်ရာက်မှု .. လူဦးရေ အရ ..တန်းညှိလို့ ရမလား … ကိုရင် ရဲ့ ….
တိမ်မည်း ။ ဇော်ဂျီကနေ ယူနီပြောင်းရင် အကို ထမင်းငတ်သွားမလား ဘဝပျက် နိုင်လား။ တဦးတယောက်ချင်းစီ သက်ရောက်မူပြန်တွက်ပါလေ။
M လုလင် ။ ပညာတတ်တွေ … စကားပိုတတ်သတဲ့ ကိုရင် ရဲ့ … ကိုရင့် ယူနီကုတ် .ခဏ နေဦး …. မြို့ထဲက အိမ်တွေ .. ကားရပ် စရာ နေရာ မရှိတော့ဘူး ဟ …
တိမ်မည်း ။ အာ့ဆိုကားမဝယ်နဲ့ပေါ့ တက်စီစီး။ ဘဝပျက်မသွားနိုင်ဖူး။
M လုလင် ။ ကျနော် … taxi တွေကို မယုံ ဘူး ကိုရင် .. သူတို့မောင်းတာ စီးရင် ကားမူးတယ် … 😢
တိမ်မည်း ။ ငင့်… အခု oway တို့hello တို့ဆိုးပါဖူး… စမ်းပီးပီလား… ကျနော်တော့ မစမ်းရသေးဖူး… Myanmar Plaza မှာတော့ အာ့တွေ ပေါလာတာတော်တော် အဆင်ပြေတယ်… ကားတွေရှင်းသွားတာပဲ… အ၀င်ပေါက်မှာလည်း လုပီး သိပ်မခေါ်ကြတော့ဖူး…
M လုလင် ။ စမ်းကြည့်ရသေးဘူး … မဖြစ်မနေ …. တစ်ပတ် ၂ ရက် … တော့စမ်းရမယ် ..တစ်ရက် ..၆ ထောင် ထွက်မည့်ကိန်း …
တိမ်မည်း ။ သူတို့ က မီတာနဲ့ လို့ပြောတယ် ကိုရင်… ဈေးနဲနဲကွာမယ်ထင်တယ်…
လုံမလေးမွန်မွန် ။ ကားလည်း ဝယ်မစီးနိုင်ဘူး.. တက်စီလည်း အမြဲမစီးနိုင်ဘူး.. ဘတ်စကားစီးတယ်… လမ်းလျှောက်တယ်… ဒလောက်ပါပဲ ဘဒို
အောင်မိုးသူ ။ Oway တို့ Hello တို့မဆိုးပါဘူး။ ဈေးလည်းမကြီးပါဘူး။ ပုံမှန်ပါပဲ မီတာနဲ့ဆိုပေမယ့်။
လုံမလေးမွန်မွန် ။ အင်းယာမြိုင်ထဲကနေ ကန်တော်ကြီးကို 4000 ပေးခဲ့ရဖူးတယ်လေ.. ကားပိတ်နေလို
M လုလင် ။ ပြောဦးမယ် .. တစ်ခု ရ ချင် တစ်ခုပေးရသတဲ့ … ဆိုတော့ .. ညဈေးတန်း ဖြစ်သွားပြီ .. ဘာတွေပေးလိုက်ရသလဲ …. စဉ်းစားဖို့ပါ … အဲ့လို ပေးလိုက်ရသူတွေက .ကျေနပ် ပါ့မလား … ဒီလောက်ပါပဲ …
တိမ်မည်း ။ အာ့ကနဲနဲရှည်တယ်။ ဆက်စောင့်ကြည့်ရမယ်။ အခုပြောလို့မရ။
M လုလင် ။ ရတယ် ..ပြောပြမယ် .. ကြုံ နေတာ .. ညဈေး မဖွင့်ခင်ထဲက ..
ဝင့်ပြုံးမြင့် ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ယူနီကုတ် ကိစ္စမှာတော့ စူပါကွန်ဗေးလေးကို ထောက်ခံပါတယ်နော။
MisterMar Ga ။ ချစ်သောမျက်စိ ဗျ….
ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ပြောရမှာကတော့ ယူနီကုဒ်က လူအမြင်ကတ်တာ များသွားတယ် ဆိုတာပါပဲ
တိမ်မည်း ။ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း နဲ့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်ပေါ့။
MisterMar Ga ။ ကိုရင် တွေ့နေတာပဲလေ ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်လား မဖြတ်လား ဆိုတာ
M လုလင် ။ ဟုတ်တယ် … ဦးသန်းရွှေ ဆိုရင်လဲ ….. မှန်ကန် နေရဲ့သားနဲ့ လူအမြင်ကတ် တာ များသွားလို့ … Fatty Cat ။ ဟေ့ဟေ့… အဲ့နှစ်ခုက သဘောသဘာဝခြင်းမတူဘူး… အဲ့လိုဆွဲစိလို့မှမရတာ…
တိမ်မည်း ။ In my view, တူတူပဲ။
နွေဦး ။ စည်းကမ်းမရှိလို့ လမ်းဘေးဈေေးရောင်းနေတာ စည်းကမ်းရှိကြပါဆိုတော့ တခုခုများမှားနေတာလား..
တိမ်မည်း ။ ဒီအမြင်လည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ရဲစည် ။ ညဈေးတန်း အင်းလိပ်လို့ ဘလေဇာ ခေါ်မလား အဲ့တာလေး နေရာကျယ်ကျယ် အရင်လုပ်ရမှာ
တိမ်မည်း ။ ဘယ်လိုကျယ်မှာလဲဟင် နောက် တလိန်း ယူမှာလား…
ရဲစည် ။ အခြားနေရာ ရွေးခိုင်းတာပါ ညေး
တိမ်မည်း ။ ဗိုလ်တထောင် ကမ်းနားကို ရွေ့ မှာလား…
ရဲစည် ။ မဆိုးဘူးလားလို့
တိမ်မည်း ။ အင်း သိပ်မရောက်ဖူးဘူး… ရောက်ဖူးတာက သီတင်းကျွတ်တုန်းက တခါလားရောက်ဖူးတယ်… အဲ့ဒါလည်းကြာပိ… သီတင်းကျွတ်တော့ စည်သားရယ်…
ဆူး ။ ဗိုလ် ၁ထောင် မဆိုးဘူး သီးသန့်ဖြစ်နေလို့ safe ဖြစ်မယ် ထင်တယ် ညလုံးပေါက်တောင် ရောင်းလို့ရသေးတယ်
အာဂ ။ ဒါတို့ တိုင်းတို့ပြည် တို့ ဇော်ဂျီမြေ လွတ်လပ်တဲ့ ငါ့တို့တွေ တိုင်ရင်းသားလူမျိုးအားလုံး ဇော် ကြပေ။ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ Fatty Cat ။ လမ်းဘေးဈေးသည်နဲ့ ယူနီကုဒ် သဘောသဘာဝအရ လုံးဝမတူကွဲပြားတယ်…
လမ်းဘေးဈေးသည်ဆိုတာ စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်အတွင်း တနည်းအားဖြင့် အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်နိမိတ်မှာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့လုပ်ရပ်… ယူနီကုဒ်ခြင်း မကုဒ်ခြင်းက မိမိတစ်ကိုယ်ရည်တကိုယ်ရ ပိုင်ဆိုင်သော ပစ္စည်းအတွင်း မိမိဘာသာရွေးချယ်မှု…
လားလားမှမတူညီတဲ့ကဏ္ဍ ၂ခုကို အတင်းဆွဲမစိပါနဲ့လား…
တိမ်မည်း ။ ခီညလည်း တဒုတ်ခ… လိုရင်းကို မမြင်တက်… မဆိုင်တာတွေ စွက်ပြောနေပါပီ…
Fatty Cat ။ မတူတဲ့ကဏ္ဍကို အသာထားပြီး လမ်းဘေးဈေးသည်ချင်းအတူတူ မတူညီတဲ့ရောင်းကုန်ကြောင့် သက်ရောက်နိုင်တဲ့ကိစ္စလေးဆွေးနွေးရအောင် Unicode ကို ခဏထားခဲ့ပါလေ…
Fatty Cat ။ လမ်းချော်တာမဟုတ်ဘဲ လမ်းဘေးဈေးသည်ကိစ္စလေး စာရင်းအရင်ချုပ်ကြည့်ရင်… ကွီးဖြိုးရေ… ခင်ဗျားမှားတယ်ဗျာ…
Safety Reason ခဏထားဦး… လမ်းဘေးဈေးသည်နဲ့ ညဈေး သဘောသဘာဝချင်းကိုမတူတာ အတင်းဆွဲစိသကိုး…
ညဈေး (Night Market) ဆိုတာ Street Food တွေ အဝတ်အစားစတဲ့ လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအသေးအဖွဲတွေအတွက်ဖွင့်ကြတာ…
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ ဆွဲဆောင်မှုအထိတောင်လုပ်လို့ရသတဲ့… ကဲဗျာ… လမ်းဘေးဈေးသည်တွေကို အစုခွဲကြည့်ရင်…
အလုပ်အပြန် ညစာအတွက် လွယ်လင့်တကူ အသားငါး ကုန်ခြောက်စတာတွေ ဝယ်ဖို့ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်နဲ့
ချက်ပြုတ်ပြီးသား ရောင်းတဲ့ဈေးသည်ရယ်လို့ အကြမ်းအားဖြင့် ၂ပိုင်းခွဲကြည့်ရမယ်…ဟင်းစားကုန်ခြောက်ရောင်းတဲ့ဈေးသည်က ညလုံးပေါက်ရောင်းစရာမလိုဘူးပေမယ့်အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်က ရောင်းရရင် ညလုံးပေါက်ရောင်းကြမှာပဲ… အခုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်က လမ်းဘေးဈေးရောင်းတဲသူ တမျိုးတစားတည်းအတွက်ဖြစ်နေတော့
လှေကား ၃ထစ်လောက်မြင့်ရင်တောင် တက်လာလေ့မရှိတဲ့မြန်မာ့အလေ့အထအရ… စီးပွားပျက်ရုံသာရှိတော့မပေါ့…
ဆူး ။ ခလုပ်တိုက်မှ ၀ယ်ချင်တဲ့ မြန်မာများ ကားရပ်ပြီး ဈေးဝယ်နေသတဲ့
တိမ်မည်း ။ အခုဟာက ပြောရတော်တော်ခက်တာဗျာ… အပြစ်တင်ချင် ကွီးဖြိုး တယောက်တည်း ပြောမရဖူး… ရန်ကုန် လူဦးရေ တိုးလာတာကို ဘာမှ မလုပ်ပဲ နှစ်ပေါင်း ငါးဆယ် နီးနီးလောက် ငုတ်တုတ် ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ စည်ပင်ပဲ အပစ်တင်ရမယ်… လမ်းဘေးဈေးသည် ပြောပြော ဘာပြောပြော ဖယ်ရမှာတော့ အမှန်ပဲ… လက်ရှိ အခြေအနေ အရ မဖယ်ရင် ဘာမှ ကိုလုပ်မရတာ… ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ဖယ်ကျမလဲ… ဖယ်ပုံဖယ်နည်းက သိပ်တော့ အားမရတာ အမှန်ပဲ… ဒါပေမယ့် ခက်တာကလည်း ဒီနည်းကလွဲလို့တခြားနည်းကလည်း သိပ်မရှိ… အစိုးရအနေနဲ့ဖွံ့ ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ အတွက် တချို့ ဟာတွေ စတေး ပစ်ရဖို့ များတယ်… အဲ့အတွက် လမ်းဘေး ဈေးသည် အများစု မြေဇာပင် ဖြစ်သွားတာ စိတ်မကောင်းဖူး…
M လုလင် ။ မြေဇာပင်က . အကုန် ဖြစ်တာကွ .. ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်း နဲ့ …. ရွာတွေပတ် ကုန်ရော ..
Fatty Cat ။ ကွီးဖြိုးလို့ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ရင် နောက်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတဖွဲ့လုံး အလိုလိုပါတယ်… ပိုကြီးလာရင် NLD အစိုးရတခုလုံးပါတယ်…
နောက်ဆုံးအရင်းစစ်ရင် နင်းတိုင်းပြားမယ့် တနေ့လုပ်တနေ့စား ဒီဈေးသည်တွေကိုပဲ ချပြီးပြားကပ်အောင် နင်းရတော့မှာလား ကိုဖြိုးကြည်… ကျုပ်အမြင်တော့ ဒီတခါကိစ္စက ဆေးမြီးတိုနဲ့ကုတာပဲ… အဲ့ရောဂါက ပျောက်ဖို့ရာမမြင်… နာတာရှည်ကို ဆေးအလွဲတိုက်မိပြီ…
တိမ်မည်း ။ ကိုသော်ရေ… အမှန်တော့ ကျနော်လည်း ဒီဈေးသည်တွေကို မဖယ်စေချင်ဖူးရယ်… ကျနော် ပြောပီးပီလည်း သူတို့ က ဘ၀နဲ့ ရင်းရတာ… သူတို့ဘယ်လိုလုပ်တယ်… အကြွေးတွေ ဘယ်လိုယူရတယ်… ကျနော် သိပ်သိတာပေါ့… ပြားကပ်အောင် နင်းတယ်လို့ မဟုတ်ဖူး… ဒါပေမယ့်လည်း တဖတ်ကကြည့်ရင် အဲ့လိုမှ မလုပ်ရင် အနာကရင်းနေပီ… မကြာခင် အနာက ပုပ်ပွပီး ခြေဖျက်ရမယ့် ဘ၀ရောက်တော့မယ်… မြို့ တော်က နယူးဒေလီလိုလို ဖြစ်မှာ… အဲ့တော့ မဖြစ်ခင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ… ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ… အဲ့တော့ ကိုသော်ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုများ သူတို့ ကို ဖယ်မလဲ….
လိုရင်းကတော့ မြို့ ထဲမှာ လမ်းရှင်းရမယ်… မကြာခင် မြို့ ထဲမှာ ဘက်စကား မက်ထရိုလိုင်းစွဲလိမ့်မယ်… အဲ့လိုင်းတွေက အခု ဈေးသည်တေါ ယူထားတဲ့ နေရာတော်တော်များများက ပတ်သွားကြမှာရယ်… အဲ့အတွက် လမ်းရှင်းတာလို့ မြင်မိ…
Fatty Cat ။ ဒီနေရာမှာ အပိုင်း ၃ပိုင်းခွဲပြောမယ် ။ တပိုင်းက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ ။ ဒုတိယက စနစ်တကျ လမ်းဘေးဈေးရောင်းတဲ့ကိစ္စ ။ နောက်ဆုံးတခုက လူတွေလိုက်နာရမယ့်ကိစ္စ ။ ကားအစီး တသန်းရှိရင် တသန်းလုံးနေ့စဉ်လမ်းပေါ်ရောက်မနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ… အဓိကအချက်က မထသဖျက်လိုက်တယ်…
ဒါပေမယ့် မထသထူထောင်ထားတဲ့နှစ်ဆွေးအခြေကျစနစ်ဟောင်းအမှားကြီးကို ဖျက်လိုက်နိုင်တာမှမဟုတ်တာ…
အုံနာကျေးစနစ်နဲ့ပိုက်ဆံရပြီး ကြီးပွားနေတဲ့ ပိုင်ရာဆိုင်ရာလူတစုလက်ထဲကနေ…
သက်တောင့်သက်သာနဲ့ Safty ဖြစ်တဲ့ စနစ်အမှန်တခု ချက်ချင်းပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရမယ်…
ဒါကို ရန်ကုန်အစိုးရလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီလား… အချိန်အတိုင်းအတာတခုအရ မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး… ပိုက်ဆံလဲရှိပုံမပေါ်သလို…
နှစ်ရည်ရင်းနှီးပြီး အနစ်နာခံမယ့် ငွေရှင်စီးပွားရေးသမားအဖွဲ့အစည်းလဲရှာတွေ့ပုံမပေါ်… နိုင်ငံတကာရင်းနီးမြှုပ်နှံမှုခေါ်ရအောင်လဲ အစိုးရကအာမခံချက်မပေးနိုင်… အရင်ဆုံးရှာရမယ့်အဖြေက လူတွေ Public Transportation ကို စိတ်လည်လာအောင် တဖက်က Developmemt လုပ်ပြီး တဖက်က လူတွေ ကိုယ်ပိုင်ကားပေါ်ကဆင်းအောင် ကြပ်ရမယ်… ဒါဆိုရင်ရော ကိုယ်ပိုင်ကားပေါ်ကလူတွေက တိုင်းပြည်အတွက်အနစ်နာခံပေးမယ်တဲ့လား… ဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေပဲ အရင်ဖြေစမ်းပါဦးဗျာ…
တိမ်မည်း ။ ကိုသော်ရေ… အခုလမ်းဘေးဈေးသည်တွေ အဖယ်ခံရတာ… အဲ့ Public transportation လုပ်ဖို့ လို့ကျနော်မြင်မိတယ်… ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ… မြို့ တွင်းခြောက်မြို့ နယ်… မက်ထရိုလိုင်းလုပ်လိမ့်မယ်… အဲ့အတွက်ဖယ်တယ်လို့ မြင်မိတယ်… ခြောက်မြို့ နယ် အပြင်ဘက်အထိပဲ ဘက်စကားကြီးတွေလာမယ်… မြို့ တွင်းက မီနီဘက်စ်လေးတွေ ပြေးလိမ့်မယ်… ဆိုးတာတခုက အဲ့မီနီဘက်စ်က ထိုင်ခုံမပါဖို့ များတယ်… နောက်တခုက အဲ့ မက်ထရိုကိတ်စပေါ်လာရင် မြို့ တွင်းဝင်ခကို ကိုယ်ပိုင်ကားတွေကိုလည်း ကောက်မယ်လို့ပြောသံကြားတယ်… သဘောက ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ မြို့ ထဲဝင်ရင် ကျေးတခုပေးရဖို့ များတယ်… ကျနော့် အထင် အမြင် သက်သက်ပါ… ကွီးဖြိုး အဲ့လို တကယ်လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင်ကတော့ သူအပေါ် သံသယရှိတုန်းကပဲ…
Fatty Cat ။ ခက်နေတာက ချမပြနိုင်သေးဘူး… နောက်တခုက မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာမောင်းနှင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆို လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားတဲ့ကားကို Downtown ဝင်လို့ပိုက်ဆံကောက်မယ်ဆိုတာ…Proper Solutions မဟုတ်တာတော့အသေအချာပဲ… ဒါလဲဆေးမြီးတိုပဲ…
တိမ်မည်း ။ နောက်ဆေးမြိးတို တခုရှိသေးတယ်… အဲ့ဒါက ရပ်နားခွန်ကို တိုးကောက်တာ… မည်သို့ ပင်ဆိုစေ လိုရင်းက ကိုယ်ပိုင်ကားတွေကို မလိုအပ်ပဲ သုံးစွဲတာ လျော့ချဖို့ နဲ့အဲ့ကနေ တဆင့် အခွန်ရဖို့ ပဲ…
M လုလင် ။ ကိုယ်ပိုင်ကား မလိုအပ် ပဲ သုံးတယ် ပြောချင်ရင် public transpotation ကို လုံခြုံအောင် အရင် လုပ်ရမယ်။ ကိုရင် …. ကျနော် ဆို အာရုံ များတယ် … ကိုယ့်ကားနဲ့ကိုယ်ဆို .. ဘာပစ္စည်းမှ မပျောက်ဘူး ….. taxi တို့ လိုင်းကား တို့ဆို .. တကယ် အဆင်မပြေဘူး ..စီးရတာ …
တိမ်မည်း ။ public transportation လုံခြုံအောင် လုပ်ဖို့ကြိုးစားကျရင် လမ်းဘေးဈေးသည် နင်းချသလို ဖြစ်နေတာ ကိုရင်အောင်ရယ်… ဝိုင်းစဉ်းစားဖို့ က ဒီဈေးသည်တွေကို အသက်သာဆုံး ဘယ်လို ဖြစ်အောင် လုပ်ရမလဲဆိုတာပဲ… အရင်နေရာပဲ ဆက်ထားဖို့ ကတော့ ဘယ်လိုမှကို အဆင်မပြေပါ…
လုံမလေးမွန်မွန် ။ နယ်တွေမှာ အလုပ်အကိုင်တွေ ရှားပါးလားတယ်.. လူတိုင်း မြို့တက်လာကြတယ်.. နယ်မှာချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့ လယ်ပိုင်ရှင်တွေကအစ လှိုင်သာယာမှာ မြေကွက်ဝယ်.. အဆောင်ဆောက်ပြီး စီးပွားရှာချင်လာကြတယ်.. မြို့စွန်က လူတွေ မြို့ထဲမှာ ဈေးလာရောင်းကြတယ်.. လမ်းဘေးမှာ အသာလေးဈေးဆိုင်လုပ်..နောက် လမ်းပေါ်နယ်ချဲ့.. စည်ပင်က ပိုက်ဆံယူပြီး အရေးမယူ… ကားတွေပိတ်လာတော့ မြို့တော်ဝန်က နေရာချပေး.. ဒီလိုပဲ ဆိုင်ခန်းတစ်နေရာကိုအလကားရ.. အရင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုလည်း မဖယ်ပေး.. ဘာလဲ.. လူတိုင်းအဲဒီလိုလုပ်ကြလိမ့်မယ်.. ဒီတစ်ခါတော့ ကွီးဖြိုးနဲ့ သဘောချင်းမတူဘူး.. ဈေးမရောင်းဘဲ.. မြို့ထဲသွားအလုပ်လုပ်ကြသူတွေ..အိမ်အကူလုပ်ကြတဲ့သူတွေ.. မနက်ဘက် ကားကျပ်ကျပ်စီး.. ညဘက် ကားကျပ်ကျပ်စီး.. မဝရေစာ စားနေရတဲ့သူတွေ..တစ်နေကုန် နေပူစပ်ခါးထဲအလုပ်လုပ်ပြီး ကျောတစ်ခင်းစာ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့နေရာမှာ အိပ်ကြတဲ့သူတွေအတွက်.. ဒီ လမ်းဘေးဈေးသည် နေရာပေးတာ မတရားဘူး..
လုံမလေးမွန်မွန် says: Fatty Cat:
ကျုပ်တို့ ဘလောက်အနစ်နာခံနိုင်သလဲ… ဆွေးနွေးကြဗျာ…
တလကို ၃သိန်းကနေ ၁၀သိန်းအထိ စီးတဲ့ကား အမျိုးအစားပေါ်လိုက်ပြီး အစိုးရကို မောင်းနှင်ခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ရမယ်ဆိုရင် ကျေကျေနပ်နပ်လျှောက်ပြီး ပိုက်ဆံပေးမယ့်လူ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်နှယောက်ရှိမလဲဗျာ…
လမ်း ၃၀ အထက်ဘလောက်မှာနေတယ်ဆိုပါစို့…
အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ ယာဉ်ရပ်နားစခန်းက ကမ်းနားလမ်းမှာရှိတယ်…
ဘယ်သူက စိတ်ချလက်ချနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ထားပြီး နေ့စဉ် ရပ်နားစခန်းကနေ အိမ်ကို လမ်းလျှောက်ကြမလဲ…
နောက်တခု သိန်းတစ်ရာကျော်ရင်းထားလို့ တနေ့ အုံနာကျေး ၁သောင်းရနေတဲ့ Taxi ကို တဦးတည်းပိုင်လုပ်ခွင့်မပေးတော့ဘဲ…
Company တခု သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတခုကနေတဆင့်ပဲ ပြေးဆွဲခွင့်ရှိတော့မယ်…
အုံနာကျေးအနေနဲ့ ၅၀၀၀ ကနေ ၇၀၀၀ လောက်ပဲရတော့မယ်ဆိုရင်ရော…
Taxi ပိုင်ရှင်တွေ ရန်ကုန်မြို့သာယာလှပဖို့အတွက် ပျော်ပျော်ကြီးအနစ်နာခံကြမှာလား…?
အရင်ဆုံး နင်းပြားဆင်းရဲသားတွေ ချမနင်းခင်…
လုံမလေးမွန်မွန် says: လုံမလေးမွန်မွန်
အဲဒီကိစ္စကို တစ်ခါစဉ်းစားဖူးတယ်.. တစ်ခြားဟာတော့ မဟုတ်ပါဘူး..ယာဉ်ရပ်နားစခန်းတွေရှိတယ်.. အဲဒီနေရာတွေက အိမ်နဲ့တော့ ဝေးတာပဲ.. ထားပါ.. အဲဒီမှာကားထား.. အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်.. အိမ်ကနေ အဲဒီကို လမ်းလျှောက်.. ကားယူ.. အဲဒီလို လုပ်နိုင်တယ်ပဲ ထားဦး.. ဥပမာ ညကြီးသန်းခေါင် ကျန်းမာရေးကိစ္စရှိလာပြီဆိုပါတော့.. အဲဒီအထိ ကားသွားယူဖို့ ဘယ်အဆင်ပြေပါ့မလဲလို့ စဉ်းစားနေတာ.. နောက်တော့ အဖြေထွက်လာတယ်.. သူများနိုင်ငံတွေမှာ လူနာတင်ယာဉ်ခေါ်ရင် ချက်ချင်းရောက်လာတာကိုးလို့
လုံမလေးမွန်မွန် says: Fatty Cat
24/7 စီးချင်ရင် တဈေး
Weekday 24Hours ဆိုတဈေး
Weekend 24Hours ဆိုတဈေး
Weekday မနက် ၇ ည ၇ ဆိုတဈေး
Weekday ည ၇ မနက် ၇ဆို တဈေး
Weekend မနက် ၇ ည ၇ ဆိုတဈေး
Weekend ည ၇ မနက် ၇ဆို တဈေး
Emergency Case အတွက် တလကို ၄ကြိမ် သတ်မှတ်တာ ကျော်သုံးခွင့်ပေးလိုက်…
အချိန်မှားကြီး အရောင်မှားကြီးနဲ့ သတ်မှတ်အကြိမ်ကျော်ရင် ၃လ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းထဲလာထိုးထားရမယ်ဆို…
Taxi တွေ ပိုက်ဆံပိုရလာမယ်…
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပြင်သစ်မှာ အဲလို ခွဲထားတယ်ဟုတ်
စနစ်ကောင်းရင် မွေးစားဖို့ ယူသုံးဖို့လုပ်ကြရတာ ထုံးစံပဲလေ…
Import လုပ်နေရတဲ့ စက်သုံးဆီပမာဏလျော့သွားမယ်…
ပြန်ဝင်လာမယ့်ငွေကို အစိုးရသစ်အနေနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် စီမံခန့်ခွဲနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မြင်ပါတယ်…
အောက်ချေလူတန်းစားထက် လူလတ်တန်းစားကိုပဲ နင်းရမှာဗျ…
အဲ့စနစ်သုံးရင် လမ်းဘေးရပ်ထားတဲ့ကားတွေ နဲနိုင်သမျှနဲသွားမယ်…
မြို့ထဲက လမ်းတချို့ကို ဈေးရောင်းဖို့ နာရီအကန့်အသတ်နဲ့ သုံးရေ… အမှိုက်စွန့်စနစ်စည်းကမ်းစနစ်တကျနဲ့ လမ်းဘေးဈေးရောင်းခွင့်ပေးရမယ်…
ပိတ်တဲ့လမ်းတွေက မြေညီထပ်မှာ… လူနေအိမ်နဲတဲ့လမ်းမျိုးဖြစ်ရမယ်…
ဥပမာ… လမ်းမတော်, ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း…
လုံမလေးမွန်မွန် says: တိမ်မည်း
တလ သုံးသိန်းများပေမယ့် လစဉ်ကြေးကို ကားတန်ဖို့းပေါ် ကြည့်ကောက်ရမှာ သဘောကျတယ်… လမ်းဘေးရပ်နားခကိုတော့ ကောက်နိုင်ပါ့မလားလို့ သံသယရှိတယ်… ဒီကြားထဲမှာ ချိန်ဖို့ လိုမယ်… စနစ်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဝင်ငွေနဲ့ မျှနိုင်မယ့် ဈေးနှုန်းတခုဆို မဆိုးဖူး..
အခု Shopping Mall မှာလိုပေါ့…
ဝင်တာနဲ့ Smart Card တခုပေး…
ကားပြန်လာယူရင် Packing ကြေးကောက်…
ခင်ခ says: မဟာရန်ကုန်ကြီးမှာ ကားရပ်နားထားလို့ရတယ် အထပ်မြင့် စင်တာတွေ ဖော်ဆောင်ဖို့လိုနေပါပြီ၊ အဲလိုတွေ မလုပ်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ဟိုဘက်တိုးလိုက် ဒီဖက်တိုးလိုက် စတဲ့မြို့သစ်တွေ ချဲ့လည်း မြေ၀ယ်ပြန်ရောင်း ကောင်းစားဈေးကွက်ဘဲဖြစ်မယ်။ ကားထားတဲ့ အထပ်မြင့်စင်တာတွေ ဆောက်ဖို့ မြေနေရာမှမရှိတာဟု ဆင်ခြေပေးရင် တစ်ခုပြောချင်တာက အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန တွေပိုင်ပြီး အလုပ်မဖြစ် နိုင်ငံဝင်ငွေမရတဲ့ မြေနေရာတွေအများကြီးပါ စစ်ရုံးပိုင်မြေတို့ ရထားဝန်ကြီးပိုင်မြေတို့ ကုန်ထုတ်မရှိတော့တဲ့ ဂုန်နီစက်ရုံ ချီမျဉ်စက်ရုံ လှည်းတန်းလမ်းဆုံနားက တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်မြေ အဆညမြေ အဲဒီလိုမြေတွေမှာ ၀န်ကြီးဌာနတွေက ကုမ္မဏီတွေကို တင်တာခေါ်ပြီး မြေဌားစနစ်နဲ့ အထပ်မြင့်ကားပါကင်လုပ်ငန်းကန်ထရိုက်ပေးလိုက် အစိုးရ၀န်ကြီးဌာနတွေလည်း ၀န်ကြီးဌာန၀န်ငွေရမယ် လမ်းပေါ်မှာ ပါကင်ကားတွေလည်း ရှင်းသွားမယ်ပေါ့။ downtown ထဲမ၀င်မှီလောက်မှာ အထပ်မြင့်ကားပါကင်တွေထား downtown ထဲကို ပါပလစ် taxi တွေနဲ့ဘဲ ခရီးတိုသွားခိုင်း taxi တွေကိုလည်း ခရီးသည်ချပေးပြီးရင် mall တို့ taxi ရပ်ခွင့်နေရာတွေမှာဘဲရပ်နား နေရာတကာ ရပ်ခွင့်မပေးရင် downtown ထဲကားကျပ်တာလျော့လာမယ်၊ အဲလိုဘဲ မြို့နယ်တွေလမ်းတွေမှာ ဘေးတဖက်စီရပ်ထားကြတဲ့ အဲနားကတိုက်ခန်းနေသူတွေရဲ့ ကားတွေကို အနီးစပ်ဆုံးအထပ်မြင့်ကားပါကင်မှာ ရပ်နားထားစေရင် မြို့နယ်လမ်းတွေလည်း ချောင်လာမယ် မြေနေရာတွေ ပိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေလည်း ၀င်ငွေရ ရန်ကုန်အစိုးရဘက်ဂျက်လည်းတောင့်တင်းလာမယ်ဟု အတွေးခေါင်ခေါင်တွေးမိတာလေးပါ။
Log in to Reply	0	Was this answer helpful?LikeDislike 3713
ကားရပ်ဖို့ကိတ်စက ရန်ကုန် မြို့ ပြ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာပါတယ်… YHT ရဲ့ master plan ကို မမြင်ဖူးသေး… ကြားသိသလောက်တော့ ဘလော့ တခုချင်းစီ ပြန်ဖျက်ပီး မြို့ သစ်တည်မယ်လို့ ကြားတယ်… ဒါပေမယ့် အခုလက်ရှိ နာမည်ထွက်နေတာက မြို့ သစ်ချဲ့ တာပဲ… ဒဂုံဆိပ်ကမ်းနဲ့သန်လျင်ကို ရှယ်ကိုင်မယ်ထင်တယ်… ပီးတော့ မြို့ ထဲ ပုံနေတဲ့ဟာတွေ အဲ့ဘက် ဖြန့် ထုတ်မလားပဲ….
Thint Aye Yeik says: .အကုန် ဖတ်လိုက်ပြီးပြီ။
ကိုယ်ပိုင်ကားမှ လွဲရင် တက်စီတောင် စီးရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာ တွေ့ရလို့. . .
အော်. . .ဖြစ်ပုံ
တနေ့တနေ့ ဘတ်စ်ကားကျပ်ကျပ်ပေါ် အတင်းတိုးခွေ့ တက်ပြီး ရုန်းကန်နေရတဲ့သူတွေ များတဲ့မြို့မှာ ဒီစကား ကြားရတာ ဆန်းကြယ်လိုက်တာ။
ဒီလူတွေ. . . အဆီအနှစ်ချည်း စားစမ်းဆိုရင် ရှေ့ဆုံးက ပြေးစားမယ့်သူတွေ . . .
.ဆောင်ကြစမ်း အခွန်တွေဆိုရင်တော့. . . ရှေ့ဆုံးက ပြေး ရှောင်မယ့်သူတွေ လား
ကထူးဆန်း says: ပြောပေါင်း များ လို့ ရိုးနေပါပြီ ……. သဘော အကျဆုံးက သတင်းကြေညာသွားတာ …
အဆင့်မြင့် ဂျပန် နိုင်ငံလုပ် အိမ်သာ များလည်း ပါသည် တဲ့ .. သြော် ဘွ ဘွ … အဆင့်မြင့် အိမ်သာရယ်လို့ လည်း ဂုဏ်ယူနေရတယ် …
kai says: ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်ကို.. အမေရိကားလည်လည်ခေါ်လိုက်တာကပဲ.. အဖြေလို့ထင်တယ်..။
ဆန်ဖရန်၊ အယ်လ်အေ၊ နယူးယောက်၊ ချီကာဂိုတွေကို.. လိုက်ပြ..။
ကျန်တာ သူ့အလိုလိုဖြစ်ကုန်မှာပဲ.. Log in to Reply	0	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: ဇော်ဂျီနဲ့ညစေးတန်းတော့မသိ….
ဗိုလ်တစ်ထောင်နဲ့ အင်းစိန်တော့ အလုပ်ပြန်ချိန် အမြဲနောက်ကျနေလို့ အလုပ်တောင် လာဖို့ ကြောက်လာပြီ။
ကားတောင် ကားမရှိပဲနဲ့ စဉ်းစားမိတာ ရှိသေးတယ်။ ငါ ကားဝယ်ပြီးရင် ဒီလိုလမ်းပိတ်နေပုံနဲ့ဆိုရင် စိတ်မရှည်လို့ လမ်းဆင်းလျှောက်ရင် ကားဘယ်နားထားခဲ့ရမလဲလို့လေ
အင်း မုန့်ဆီကြော်က ဘယ်နားမှ မရှိဘူး နှုတ်ခမ်းနာက အရင်ဖြစ်မိနေတော့တယ်။ ညဈေးတန်းကြီးပေါ်လာတော့ ကားရပ်စားမယ့်သူတွေ ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးမလဲသိချင်မိသား…